प्रदेशसभा तेस्रो लिङ्गी ललन सदालाई मजदुरहरुको भीडमा भेट्यौं ! « Onlinetvnepal.com
प्रदेशसभा तेस्रो लिङ्गी ललन सदालाई मजदुरहरुको भीडमा भेट्यौं !
Published :4February, 2018 8:09 pm
On : प्रदेश, प्रदेश २
प्रदेश नम्बर दुईको संसद भवन सिंगार्ने र सरसफाइ गर्ने काम धमाधम भइरहेको थियो । हामीले त्यहाँस्थित मजदुरहरुको भीडमा तेस्रो लिङ्गी ललन सदालाई भेट्यौं । उनी तेस्रोलिङ्गी हुन् भन्ने हामीलाई थाहा थिएन, तर उनैले पहिचान खुलाए- सर म त तेस्रोलिङ्गी !
लुटन जनकपुर उपमहानगरपालिका- २५ लोहनाका स्थायी बासिन्दा रहेछन् । लोहनाका एकैबस्तीका ५० भन्दा बढी मजदुरहरु संसद भवन सिंगार्ने काममा खटिएका थिए ।
लुटनसहितका तेस्रो लिंगी साथीहरुलाई यहाँ सरसफाइको काम दिइएको थियो । फोहोर उठाउने र सही स्थानमा ब्यवस्थापन गर्ने उनीहरुको दायित्व हो ।
लुटनसँगै अन्य तीनजना तेस्रो लिंगी पनि काम गर्न आएका रहेछन् । जनकपुर १२ स्थित कुवारामपुरस्थित प्रदेशसभामा पुग्दा लुटन सदासहित अन्य साथीहरु खाना खाने सुरसार गर्दै थिए ।
उनलाई तेस्रो लिङ्गी भएकै कारण घर नआउन भनियो । तर, अचेल कहिलेकाहीँ घर जान्छन् । तर, बाँकी समय साथीहरुसँगै बसेर ज्यालादारी मजदूरीबाट उनले गुजारा चलाइरहेका छन् ।
अनलाइनखबरकर्मीले कुरा गर्न खोज्दा उनले भगवानमाथि नै प्रश्न गर्दै भने- ‘भगवानले हामीलाई के बनाइदियो ?’ यसको भन्दै गर्दा काम गरेकै ठाउँमा उनका आँखा रसाएजस्ता देखिए । तथापि उनले चित्त बुझाउन खोज्दै मैथिलीमिश्रित भाषामा भने ‘तर अब जे छु, त्यसैमा खुशी छु, अब केनै तो गुजरा चलावके छई वो सर ! को नो गलत बात कहिल्यै ।’
तेस्रोलिंगी समुदायका लुटन सामान्य मजदूर हुन् । बिहेबटुलोमा नाचेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका उनी प्रदेशसभाको भवनमा सरसफाइ गर्न आउनु अघिसम्म काम नपाएर भौंतारिइरहेका थिए ।
लुटनका लागि जनकपुरधाममा प्रदेशको राजधानीसँगै केही दिनकै लागि भए पनि रोजगारी आइपुग्यो । जनकपुरस्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रमा प्रदेशसभा भवनको रंगरोगनको तयारी भइरहेको थियो ।
आइतबार पहिलो बैठक बस्ने डेडलाइनको चापमा थिए भवन विभागका हाकिम र ठेकेदारहरु । जसरी पनि शनिवार साँझसम्म प्रदेशसभा भवन र बैठक कक्ष तयार पानुपर्ने थियो । र, यो काममा खटिएका मजदूरको भिडमा भेटिए तेस्रोलिंगी लुटन ।
अरुबेला नाच, आर्केस्टालगायतका मनोरञ्जनात्मक कार्यमा नाचेर गुजारा चलाउने लुटन गाउँका साथीभाइले काम मिलेको छ भन्ने जानकारी दिएपछि प्रदेश सभा बैठक परिसरमा काम गर्न आएका रहेछन् ।
तर, यहाँ के हुँदैछ र केका लागि भवन सिंगारिँदै छ भन्ने कुरा लुटनलाई केही थाहा छैन । प्रदेशसभासँग उनलाई कुनै सरोकार पनि छैन । यद्यपि यसपटकको दुवै तहको निर्वाचनमा चाहिँ उनले तेस्रो लिङ्गीकै पहिचानमा मतदान गरेको बताए ।
प्रदेशसभा सरसफाइको काम गर्ने मजदुरले प्रतिदिन ६ सय रुपैयाँ सुख्खा ज्याला पाएको लुटनले बताए । ज्यालामा चाहिँ ठेकेदारले तेस्रो लिंगी भनेर बिभेद गरेका छैनन्, तर व्यवहारमा भने धेरैपटक विभेद खेप्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।
आजैबाट प्रदेश भवन सिंगार्ने लुटन सदाको पनि काम सकिँदैछ । यहाँ लुटनजस्तै पीडित मजदुरहरुले भवन सजाएका छन् । तर, तेस्रो लिङ्गी लुटन सदाले सफा बनाएको यो प्रदेशसभाले अब लुटनजस्तै तेस्रोलिङ्गीहरुको रोजगारी र आत्मसम्मानको प्रवन्ध गर्ने नीति नियमहरु बनाउला ? यो चाहिँ प्रतिक्षाको विषय हो ।